एभिन्युज टेलिभिजनभारतीय लोकसभा निर्वाचनको नतिजा आज, कसको बन्ला सरकार ? - एभिन्युज टेलिभिजन
भारतीय लोकसभा निर्वाचनको नतिजा आज, कसको बन्ला सरकार ?
9 Jestha 2076 Thursday 7:16 am प्रतिकृया दिनुहोस
भारत : भारतीय लोकसभा चुनावको मतगणना आज हुँदैछ । विहान आठ बजेवाट गणना शुरु हुने निर्वाचन आयोगले जानकारी दिएको छ । नतिजा चरणबद्ध रूपमा प्रकाशित हुने निर्वाचन आयोगले जानकारी दिएको छ । अन्तिम नतिजा बिहीबार अबेर वा शुक्रवार सबेरै आउने अपेक्षा गरिएको छ ।
इलेक्ट्रोनिक भोटिङ मेसिनको नतिजालाई प्रिन्ट गरिएका मतपत्रसँग रुजु गर्नु पर्ने हुँदा गणनामा केही ढिलाइ पनि हुन सक्ने ठानिएको छ । आज करिब ८ हजार उम्मेदवार तथा ६ सय ७० राजनीतिक दलको भाग्यको फैसला हुने छ ।
५ सय ४३ लोकसभा सिटका लागि सात चरणमा चुनाव भएको थियो । सर्बेक्षणहरुले सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टीको गठवन्धनले नै यसपटक पनि बहुमत ल्याउने देखिएको छ ।
कांग्रेससहितको विपक्षी गठबन्धन भने त्यसमा सत्यता नरहेको बताउदै आएको छ । निर्वाचित भएका लोकसभा सदस्यबाटै सबैभन्दा ठूलो दल अर्थात बहुमत ल्याउने दलका नेता प्रधानमन्त्री बन्ने छन् । यस्तो हुन नसकेमा गठबन्धनका नेता प्रधानमन्त्री बन्ने छन् ।
चुनावलाई प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको समीक्षाका रुपमा पनि लिइएको छ । प्रधानमन्त्री मोदीका मुख्य प्रतिद्वन्द्वीका रुपमा कांग्रेसका राहुल गान्धी रहेका छन् । अघिल्लो चुनावमा नरेन्द्र मोदीको पार्टी भारतीय जनता पार्टीले २ सय ८२ सिट जितेको थियो । यस्तै गान्धीको पार्टी कांग्रेसले ४४ सिट मात्रै जितेको थियो ।
एजेन्सी : सिरियाले टर्कीको सेनाले आक्रमण गरिरहेको उत्तरी सिरियामा सेना पठाएको छ । टर्कीसँग लडन कुर्द लडाकुलाई सहयोग गर्ने उद्देश्यले ...